‘रेड जोन’ नेपालगञ्ज - Pradesh Today
Homebreaking-news‘रेड जोन’ नेपालगञ्ज
एकै दिन १५ जनामा सक्रमण, सख्या बढ्ले आशंका
बाँकेको नेपालगन्जमा १५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। आइतबार मात्र नेपालगञ्जमा १५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार भएको पिसिआर परिक्षण सार्वजनिकमा १५ जना मा कोरोना भएको पुष्टी भएको छ । पीसीआर विधिबाट भएको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट १५ मा पोजिटिभ आए पछि नेपालमा सक्रमितको संख्या ७५ पुगेको छ । एकै दिनमा १५ जनामा सक्रमण देखिए पछि नेपालगञ्ज कोरोना रेड जोन भएको छ । यहाँ ९० जनाको स्वाव परिक्षण भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार आइतबार साँझ नेपालगन्जका १६, २१, ३४ वर्षीय पुरुष र ४०, ५५ र ६० वर्षीया महिलामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो । उनीहरु सबैको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जको प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिउँसो मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बाँकेको नेपालगन्जमा पाँच पुरुष र चार महिला गरेर ९ जनाका कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी गराएका थिए । यो सँगै नेपालगन्जमा एक्कै दिन १५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । नयाँ संक्रमित थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७५ पुगेको छ । १६ जना भने निको भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट १३ हजार चार सय १४ र आरडीटी विधिबाट ५९ हजार ६ सय ८९ नमुना परीक्षण भएको छ ।
२१ हजार ९ सय बढी क्वारेन्टाइनमा छन् । आइसोलेसनमा ७७ जनाको उपचार भइराखेको छ। सात वर्षको बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण
नेपालमा पहिलो पटक नेपालगन्जका एक सात वर्षका बच्चामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ ।